Banijya News | थप २ हजार ९ सय ५ जनामा संक्रमण, कति छन् सक्रिय संक्रमित ? - Banijya News थप २ हजार ९ सय ५ जनामा संक्रमण, कति छन् सक्रिय संक्रमित ? - Banijya News
थप २ हजार ९ सय ५ जनामा संक्रमण, कति छन् सक्रिय संक्रमित ?
पछिल्लो २४ घन्टामा २९०५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार १३ हजार २४ परीक्षणबाट उक्त संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरमा ८१०८ जनाको पिसिआर परीक्षणबाट २०१० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ४९१६ जनाको एन्टिजेन परीक्षणबाट ८९५ जनामा पुष्टि भएको छ।
पछिल्लो २४ घन्टामा १६०६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। यस्तै १८ जनाको ज्यान गएको छ। योसहित कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९४३० पुगेको छ। हाल नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या २६ हजार ६ सय ४७ रहेको छ ।
पछिल्ला केहिदिनयता काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ४२५ जना कोभिड संक्रमित थपिएका छन् । आज काठमाडौंमा २९४, भक्तपुरमा ६९ र ललितपुरमा ६२ जना संक्रमित थपिएका हुन् ।